HORDHAC: Man City vs Man United….(Derby Manchester) – Gool FM
HORDHAC: Man City vs Man United….(Derby Manchester)
Byare April 7, 2018
(England) 07 Abriil 2018. Pep Guardiola iyo xarfaantiisa ayaa loo caleemo saari doonaa Premier League haddii ay caawa fiidkii ka adkaadaan dariskooda Manchester United.
Laakiin waxay u badan tahay in Man City ay dhigan doonto inta badan xiddigaheeda muhiimka ah maadaama ay dooneyso inay ka jawaabto jabkii ku soo gaaray Anfield lugta hore ee wareega sideed dhammaadka Champions League.
Man City ayaa indho indheyn doonta xaalada Sergio Aguero oo qaba dhibaato jilibka ah, laakiin haddii uu xitaa taam noqdo waxaa la arkaa inay doorbidaan inay u dhigtaan kulanka lugta labaad ee Liverpool Champions League.
Manchester United waxaa dhaawac uga maqan goolhaye Sergio Romero oo kaliya.
Phil Jones iyo Marcos Rojo ayaa taam ah lana safi karaa kaddib usbuuca dhan ay tababar la qaadanayeen kooxda.
Daley Blind ayaa jimcihii ku soo laabtay tababarka buuxa kaddib dhaawac canqowga ah balse uma badna inuu kulanka ka soo muuqan doono.
Kulanka: Man City vs Man United (Premier League)
Goorta: 7:30 Habeenimo.
◾Man United ayaa guul darreysatay sideed jeer 13-kii kulan ee ugu dambeeyay Derby Manchester ee horyaalka, waana in la mid ah intii laga adkaaday 49 kii kulan ay horey u kulmeen.
◾Yeelkeede, Red Devils lagama adkaan labadii jeer ee ugu dambeeyay ay booqoto Etihad Stadium (Hal Guul iyo hal Bar-baro), labada kulanba wax gool ah lagama dhalin.
◾Jose Mourinho ayaa garaacay Pep Guardiola kaliya hal kulan todobo jeer ay horyaalka ku kulmeen (4-guul darro iyo 2-bar baro), halka kulan uu ka adkaaday wuxuu ahaa ciyaar ay Real Madrid 2-1 uga adkaatay Barcelona bishii Abriil 2012.
◾Guardiola ayaa adkaaday sagaal jeer 20-kulan uu ka horyimid kooxaha uu hogaaminayo Jose Mourinho (4-guul darro iyo 7-bar baro) dhammaan tartamada.
Safafka Macquulka ah ee Man City vs Man United:
GOOGOOSKA: Saint Etienne vs PSG 1-1 (PSG oo lala baratamay)
HORDHAC: Everton vs Liverpool (Merseyside Derby)